१४ औं अनसनमा डा. गोविन्द केसी – Rastriya Yuvajagaran
Home / राष्ट्रिय / १४ औं अनसनमा डा. गोविन्द केसी
१४ औं अनसनमा डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं, पुस २४ गते । पटक पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी पुनः १४ पटकको अनसनमा बसेका छन् । कुनै न कुनै राष्ट्रिय मुद्दालाई आधार बनाएर अनसन बस्दै आएका डा. केसीले यस पटक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुलीको राजिनामा माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. शशि शर्मालाई बहाली गर्न दिएको निर्णयविरुद्ध डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा बसेका छन्।
इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने । आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने। साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने ।